पार्टी अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिले सानो र कच्चा चित्त राखेर हुँदैन । कसको कुर्सी कता फर्कियो ? कसको रुमाल कता खस्यो भन्ने जस्ता कुराहरुको हिसाब गरेर बस्नु हुँदैन । अपमान र त्यागका कुरा उठ्दा मैले अघि पनि भनेँ कि हामी सहमतीय आधारमा छौँ । लोकप्रिय मतका आधारमा हिस्सेदारी वितरण गरेका छैनौँ । राष्ट्रपति एक धार र उपराष्ट्रपति अर्काे धार, सभामुख र उपसभामुख पनि दुई पक्षले मिलेर लिएको बिर्सन मिल्दैन । पार्टीले महाधिवेशनको तयारी त गरिरहेको छ तर नेकपामा वरिष्ठ नेताहरु धेरै भएर तिनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि देखिन्छ, सँगसँगै पुस्तान्तरणको कुरा पनि आएको छ । दोस्रो पुस्ता कुनै गुटभन्दा माथि गएर नेतृत्व लिन तयार छ ? यो अबको बहसको विषय हो । तत्कालीन एमालेमा पार्टी वा सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विधि बनाइएको थियो । साथै सक्रिय राजनीतिका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी पनि थियो । विगतमा मैले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) मा त ६० वर्षे उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भएको थियो । नेकपा गठनपछि ती प्रावधान हटाइए । अबका दिनमा पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ । यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ । —
Previous Postदेशका विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु
Next Postनेपाल प्रहरीका पूर्वडिएसपी श्रेष्ठ बेलायत प्रहरीको सल्लाहकारमा नियुक्त
65Sharesविसं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्व भारतीय हस्तक्षेपविरुद्धको कदम थियो । यसरी देश चल्दैन । राजा महेन्द्रले झैं देशको सार्वभौम अस्तित्व बचाउने काम…